Soo dejisan Simple MP3 Cutter Joiner Editor 3.3 – Vessoft
WindowsMultimediaTifaftirayaasha warbaahintaSimple MP3 Cutter Joiner Editor
Bogga rasmiga ah: Simple MP3 Cutter Joiner Editor
Tifatiraha fudud ee Cutter MP3 Cutter – software fudud oo loo isticmaalo si loo hirgeliyo faylasha codka. Barnaamijkani wuxuu noqon karaa mid beereed, gooyaa, kala jajaban, isku daraa, isku daraa, isku hagaajiyaa oo hirgeliyaa faylasha qaababka dhawaaqa caanka ah ee siyaabo kale. Tifatiraha fudud ee Cutter MP3 Cutter wuxuu ka kooban yahay ciyaaryahan dhisma oo leh habdhaqan muhiim ah oo loo adeegsado si loo hirgeliyo faylka codka. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad codsato saameyn gaar ah codka baahida shakhsi ahaaneed, iyo sidoo kale soo dejinta ama dhoofinta faylka qaabab kale oo maqal ah. Editor Simple Editor Cutter Editor taageere hawlgalka ama dib u noqoshada haddii ay dhacdo qalad ah inta lagu jiro faylka faylka, waxay u ogolaaneysaa in ay saxdo metadata ama album daboolaya iyo soo bandhigo in ay ku darto Bookmarks ama tags.
Dalagyo, isku-dar, jarjaran, kala qaybsanaan
Isticmaalka saamaynta dhawaaqa
U beddelidda qaababka codka ee kala duwan
Qorista faylasha MP3 laga helo ilo kala duwan
Soo dejisan Simple MP3 Cutter Joiner Editor
Faallo ku saabsan Simple MP3 Cutter Joiner Editor
Simple MP3 Cutter Joiner Editor Xirfadaha la xiriira